Oduu Aagaa: “Simbirtuu Raadiyoo : Obbo Nadhii Gammadaa lubbuun jiraachuu hin hafne jedhame. Akka madda oduu keenyaatti obbo Baqqalaa Dawwaanoo wajjin Finfinneetti mana yaalaa keessa ciisaa jiru. – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioOduu Aagaa: “Simbirtuu Raadiyoo : Obbo Nadhii Gammadaa lubbuun jiraachuu hin hafne jedhame. Akka madda oduu keenyaatti obbo Baqqalaa Dawwaanoo wajjin Finfinneetti mana yaalaa keessa ciisaa jiru.
Oduu Aagaa: “Simbirtuu Raadiyoo : Obbo Nadhii Gammadaa lubbuun jiraachuu hin hafne jedhame. Akka madda oduu keenyaatti obbo Baqqalaa Dawwaanoo wajjin Finfinneetti mana yaalaa keessa ciisaa jiru.
Oduu Aagaa: “Simbirtuu Raadiyoo : Obbo Nadhii Gammadaa lubbuun jiraachuu hin hafne jedhame. Akka madda oduu keenyaatti obbo Baqqalaa Dawwaanoo wajjin Finfinneetti mana yaalaa keessa ciisaa jiru. Oduu kana Simbirtuun 100 fi 100tti hin mirkaneeffanne..”
Maddi Dasu Dula